တရုတ်အစားအစာ | Danuphyu Daw Saw Yee (London) | Page 3
ဒါကတော့အသီးအရွက်ကြိုက်တတ်သော အိသက်အဖေကို ကြော်ကျွေးနေကျလေးပါ။
– ကြက်ဥတိုဖူး ၁ တောင့်
– ကြက်သွန်ဆီချက်( အဆင်သင့်ရှိလျင်)
တိုဖူးလေးများကို အနေတော်လှီးပြီး ကြော်ထားပါ။
ဆီနဲနဲ နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကို ဓားပြားရိုက်ပြီးကြော်ပါ။
ပြီးရင် ကိုက်လန် အရိုးလေးများကိုရေစပ်စပ်လေးထဲ့အရင်ကြော်ပြီဖယ်ထားပါ။ ပြီးမှအရွက်ကြော်ပါ။ ပြီးရင် ကိုက်လန်ကို ပုံပါအတိုင်းပြင်ဆင်ပါ။
ပြင်ဆင်ပြီးရင် ဒယ်ပေါ်မှာခရုဆီတဇွန်းခွဲ(စားပွဲတင်)၊ သကြားတဇွန်း ကိုရေနဲရောပြီးပွက်ပါစေ။ ပြင်ဆင်ထားသောကိုက်လန်ပေါ်ကိုလောင်းလိုက်ပါ။ ပြီးမှတိုဖူးလေးများတင်ကြက်သွန်ဆီချက်လေးကို ဖြူးပြီး ပူပူလေးစားပါ။
ဆားလုံးဝမထဲ့ပါ၊ ခရုဆီက အငံကဲပြီးသားမို့ပါနော်
မချန်းလေး(မစုစုလွင်) ရဲ့ အော်ကွေးကျီလုပ်နည်း
အော်ကွေးကျီဆိုတဲ့ တရုတ်မုန့်လေးကို စားချင်နေတာကြာပြီ။လုပ်နည်းလဲ မသိတော့လေ။ ကံကောင်းစွာပဲ facebook ထဲက ချစ်စရာခင်စရာအလွန်ကောင်းသော မမ ချန်လေးက ဒီနည်းလေးပေးလို့ နောက်လုပ်ချင်ရင်ပြန်ကြည့်လို့ရအောင် တစုတစည်းတဲလဲဖြစ်အောင် မမချန်လေးခွင့်ပြုချက်ယူပြီး အိသက် blog မှာတင်လိုက်ပါတယ်..
-ပိန်:ဥ ( taro)4lb ခြစ်ထား
-ဆန်မုန့် 1lbကိုရေ3ခွက်နဲ့ရေဖျော်ထား
-ပဲငံပြာရေ, ဆား, အချိုမှုန့် ,ငါးငံပြာရေ
ဝက်(or )ကြက်တောက်တောက်စင်း ကို ပဲငံပြာရေ, ဆား, အချိုမှုန့် ,ငါးငံပြာရေ ,five spice powder နဲ့နယ်ပြီ:ဆီသတ်ထား လိုက်ပါတယ်
ပိန်:ဥ ခြစ်,ဆန်မုန့် ရေဖျော်,ဝက်(or )ကြက်တောက်တောက်စင်းနယ်ပုဇွန်ခြောက် ရေနွေးစိမ် ရောမွှေ (ဇွန်းနဲ့)ပါ။ လက်တွေယားတတ်လို့….
ပေါင်းမဲ့ခွက်ဆီသုတ်ပြီးမုန့်နှစ်ထည့် ပေါင်းအိုးမှာ၁ နာရီပေါင်းပါ။ ကျက်မကျက်ဒါးချွန်နဲ့ထိုးကြည့် မုန့်နှစ်ကပ်မပါလာရင်ရပြီ
steamer ထဲက ထုတ်ပြီးပုံ မရိုက်လိုက်မိဘူး
ပြီးရင် အတုံးလေးတွေတုံးပြီးဆီလေးမြုတ်အောင်ကြော်။ ပြီးရင်အချဉ်ရေလေးနဲ့တို့စားရင် ကောင်းမှကောင်းပဲ
ဝက်နံရိုးမုန့်ခြောက်ကပ်ကြော်/Deep fried pork ribs coated with dried cakecrump
အမေက အစားအသောက်လုပ်တာကျွမ်းကျင်သူပီပီ အစားအသောက်ဆိုလဲ သူစိတ်တိုင်းကျမှစားပါတယ်။ ဒီဝက်နံရိုးကြော်ဆိုလဲ မုန့်ခြောက်မှုန့်ကပ်ထားမှစားတယ်။ အမေနဲ့ အပြင်မှာထွက်စားကြရင် Yuzana Centre ကစားသောက်ဆိုင်မှာပဲစားပါတယ်။ အဲ့ဒီဆိုင်က ဝက်နံရိုးကြော် ကအမေ့အကြိုက် မုန့်ခြောက်အမှုန့်နဲ့ကြော်တယ်။ဘိတ်ချဉ်လေး လဲကောင်းတယ်။ ယုဇနဦးဌေးမြင့်နဲ့ဘာမှမတော်ပါဘူးနော်။တော်ကြာ ကြောငြာ ဝင်တယ်ထင်မှာစိုးလို့. အမေကြိုက်တာကိုပြောတာပါ.ဒါကြောင့်ပါ
Grasping in mind with clarity in making food, my mum wouldn’t eat if it is not satisfy her palate. This fried pork rib won’t differ. It must be coated with cakecrump. We usually dine at Yuzana Centre when we go out, as the restaurant offers my mum’s favorite fried pork ribs coated with cakecrump. The sauce that comes with it (soy sauce, garlic, coriander) is good too. By the way, we are not related to Yuzana U Htay Myint, worrying with the thought that you might think we interfere with commercial advertisement. Just that it is my mum’s favorite.
ဝက်နံရိုးကြော်ပါဝင်ပစ္စည်းများ( လူလေးယောက်စာ)/Contents of fried pork ribs (4 servings)
-ဝက်နံရိုး ၈၀၀ ဂရမ်/-Pork Ribs 800g
-ကြက်ဥ ၃လုံး/-3 eggs
-မုန့်ခြောက် ၅ ခု ထောင်းထားပြီး/-crushed dried cake4pieces
-ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်/- salt, chicken power
ဝက်နံရိုးကို ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ဂျင်းနဲ့ပြုတ်ထားပါ။
Boil the pork ribs with salt, chicken power and ginger.
ကြက်ဥကိုခလောက်ထားပါ/whisk the eggs
မုန့်ခြောက် ၅ ခု ထောင်းထားပါ
Crush the5pieces of dried crispy cakes.
Just before serving, fry it like that.
ဝက်နံရိုးကို ကြက်ဥမှာ နှစ်လိုက်ပါ။
Soak the pork ribs with whisked eggs
Then, coat it with crushed cakes and fry.
Then, you will be helpingadelicious fried pork ribs.
ဘိတ်ချဉ်က အိသက်အမေရဲ့အကြိုက်ဆုံးအချဉ်၊ ကိုယ်တိုင်လဲအရမ်းကြိုက်တယ်။ အချဉ်လုပ်နည်းလေး ရေးလိုက်မယ်နော်။ လွယ်လွယ်လေးပါနော်။
As the sauce comes with it called “bate chin”, is not just my mum top sauce, but my favourite as well. So, I will also share the recipe as it is pretty simple to make it.
တရုတ်ငံပြာရည်(soy sauce)စားပွဲတင်ဇွန်း ၇ ဇွန်း/Soy sauce7table spoons
-သကြား စားပွဲတင်ဇွန်းတဝက်/-halfatable spoon of sugar
– ငရုတ်သီးစိမ်းစိတ်/-chopped small green chilli
-ကြက်သွန်ဖြူစိတ် ၊/-chopped garlic
-နံနံပင်ဓါးနုတ်ပေါက် ၊/-minced coriander
– ကြက်သားမှုန့် စားပွဲတင်ဇွန်းတဝက်/-halfaspoon of chicken powder
-သံပရာရည်နဲနဲ စားပွဲတင်ဇွန်းတဝက်/-haldaspoon of fresh lime juice
– နှမ်းဆီ၂စက်/-2 drops is sesame oil
Mix all the ingredients together to finish up.
ခေါက်ဆွဲကြော် ကိုအိမ်မှာ ခဏ ခဏ လုပ်စားဖြစ်တယ်။ တအိမ်လုံးကြိုက်လို့ လွယ်လဲလွယ်လို့ပါ။ လုပ်နည်းလေးရေးပါမယ်နော်။
ပါဝင်ပစ္စည်း ( လူ၅ ယောက်စာ)
-ခေါက်ဆွဲ ၈၀၀ ဂရမ်
-အသီးအရွက်စုံ( ဂေါ်ဖီ၊ မုန်လာဥနီ၊ ပဲပင်ပေါက်၊ ကြယ်သီးမှို )
-ပဲငံပြာရည်အကြည် ၃ဇွန်း( စားပွဲတင်)
-ခရုဆီ ၂ဇွန်း( စပတ)
-ပုဇွန် ၆၀၀ ဂရမ် ( များများစားချင်လို့ပါ)
အရင်ဆုံးကြက်သွန်နီ ပါးပါးလှီး ထားတာကိုဂျင်းနဲ့ဆီသတ်လိုက်ပါ၊
ရွှေဝါရောင်သန်းပြီဆိုရင်အသီးအရွက်စုံ( ဂေါ်ဖီ၊ မုန်လာဥနီ၊ ပဲပင်ပေါက်၊ ကြယ်သီးမှို ) ကိုဆား၊ ကြက်သားမှုန့်နဲနဲ နဲ့ကြော်ပါ၊
၁မိနစ်လောက်ကြော်ပြီးရင် ခေါက်ဆွဲထဲ့ပါ၊ ပဲငံပြာရည်အကြည်၊ ပဲငံပြာရည်အနောက်၊ ခရုဆီ၊ သကြား၊five spice powder တို့ရောကြော်ပါ၊ ခေါက်ဆွဲနူးအောင်ရေတောက်ပေးပါ။
ခေါက်ဆွဲမနူးခင်လေးမှာပုဇွန် ထဲ့ပါတယ်( ပုဇွန်ကိုအရင်ကြော်တာမကြိုက်လို့ ၊ သိပ်ကွေးမသွားအောင်)။ ငုံးဥပြုတ်လေးများရောပါ။
ကြက်ဥလေးကို ဒယ်ပြားလေးမှာဆီပါလေကာထဲ့ အပြားလိုက် မီးနဲနဲ နဲ့ ကြော်ပါ။ ပြီးရင်ကြော်နေရင်း ဇွန်းပြားလေးနဲ့လိပ်သွားလိုက်ပါ။
ငါးရှဥ့်ခြောက်စပ်/Spicy fried eel
ရန်ကုန် ပြန်ရင် အမေ့ကိုရွှေဘဲက ငါးရှဥ့်ခြောက်စပ် ကိုဝယ်ကျွေးခိုင်းရတာအမော၊ ၂၀၁၀ ပြန်တော့ အဖေ့ညီအငယ်ဆုံး (Blackpool မှာနေတဲ့အကိုရဲ့အဖေ)က တာမွေမှာ တရုတ်စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ် အဲဒီနည်းလေးမေးခဲ့ပါတယ်။
I was even weary by pestering my mum to buy measpicy fried eel from Shwe Bel Resaturant in Yangon. When I returned in 2010, I asked my youngest uncle ( dad of my cousin brother from Blackpool) from my father’s side to give mearecipe as he runsaChinese restaurant there.
-ငါးရှဥ့် ၅၀၀ဂရမ်/-eel 500g
-ငရုတ်သီးမှုန့် ၁ ဇွန်း( စားပွဲတင်)/-a table spoon of chilli powder
-ပဲငံပြာရည်အကြည် ၂ဇွန်း( စပတ)/-2 table spoons of clear soy bean sauce
-ကြက်သွန်နီ တစ်လုံး ( ဒီကကြက်သွန်တွေကကြီးတယ်)/-1 onion ( onions in UK are big)
-ကြက်သွန်ဖြူ ၃ မွှာ၊ ဂျင်း ၂ဇွန်း( စပတ)/-3 segments of garlic,2table spoons of ginger paste
-ကြက်သွန်မြိတ် လက်တစစ်စာဖြတ်ပြီးသားနဲနဲ/-chopped spring onions
-ငရုတ်ကောင်း ၁ဇွန်း( စပတ)/-1 table spoon of pepper
– ဆား၊ ကြက်သားမှုန့် နဲနဲ/-salt, chicken powder
-အကြော်မှုန့်/-glutinous rice flour
ငါးရှဉ့်အသားတွေလက်တစစ်စာလေးတွေလှီးပြီးငရုတ်သီးမှုန့် ၁ ဇွန်း( စားပွဲတင်)၊ ပဲငံပြာရည်အကြည် ၁ဇွန်း( စပတ )၊ ငရုတ်ကောင်း ၁ဇွန်း( စပတ)၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့် နဲနဲ နဲ့ နယ်ထားပါ။
Cut the eel into desired sizes and mix them withatable spoon of chilli powder,atable spoon of clear soy bean sauce, 1 tbs of pepper, salt and chicken powder.
ပြီးရင်အကြော်မှုန့် ကိုဆားနဲနဲထဲ့ ရေကျဲကျဲဖျော်ထားပါ။ငါးရှဉ့်အသားတွေနယ်ထားတာနဲ့ ရောလိုက်ပါ။
ပြီးရင်ငါးရှဉ့်အသားတွေကိုဆီများများနဲ့ ရွှေရောင်သန်းပြီးကျွတ်တဲ့အထိ ကြော်လိုက်ပါ။ပြီးရင် ဆီစစ်ထားပါ။
Then, the glutinous rice flour will be added with some water and salt then mix them up. After that, add the cut pieces of eel into the mixed watered flour. Then fry them up until it turns golden colour and then you can dry up the cooking oil.
ကြက်သွန်နီ၊ ဖြူ ကို ဂျင်း၊ ငရုတ်သီးခွဲခြမ်းနဲနဲ, ဆား၊ ကြက်သားမှုန့် နဲနဲ ပဲငံပြာရည်အကြည် ၁ဇွန်း( စပတ ) နဲ့ကြော်ပါ၊
Fry the onion, garlic, crushed chilli, salt, chicken power and soy bean sauce 1tbs.
Once the onion becomes golden colour then you can add the already cooked eels pieces into it and continue frying for another2two minutes apporx: then the lovely spicy fried eel is ready to enjoy.
ဝက်သားလုံးကြော်က အိသက်အကြိုက် ၊ သားတွေ သမီးတွေ လဲကြိုက်တဲ့အစာ၊ သမီးလေးက အသားကျွေးလို့ မရတတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ဒါလေးဆိုရင် ဘောလုံးကြော်ဆိုပြီးစားတယ်။ ခဏ ခဏစားဖြစ်တယ်။
ဘိတ်ချဉ်က အိသက်အမေရဲ့အကြိုက်ဆုံးအချဉ်၊ ကိုယ်တိုင်လဲအရမ်းကြိုက်တယ်။ အချဉ်လုပ်နည်းလေးအရင် ရေးလိုက်မယ်နော်။ လွယ်လွယ်လေးပါနော်။
-တရုတ်ငံပြာရည်(soy sauce)စားပွဲတင်ဇွန်း ၇ ဇွန်း
– ကြက်သားမှုန့် စားပွဲတင်ဇွန်းတဝက်
-ဝက်သား ၅၀၀ ဂရမ်
– ဂျင်းpaste စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
-ကြက်ဥ ၁ လုံး
ကော်မှုန့် နဲ့ ကြက်ဥ ထဲ့ရတာက စားတဲ့အခါ အသားအရမ်းကျစ် မနေပဲ အပြင် ကျွတ်ပြီး အထဲမှာ အိနေအောင်လို့ပါနော်၊
ပြီးရင် ဝက်သားလုံးလေးတွေဆီပူထဲ ကြော်ပြီး နီလာပြီဆိုရင် ပူပူလေးကို ဘိတ်ချဉ်လေးနဲ့တို့စားလို့ရပါပြီ။
ဒါလေးက ဆိုင်တဆိုင်မှာစားခဲ့ဖူးတာ။ အဆီအဆိမ့် လေးပေါ့။ စားကောင်းလွန်းလို့ ဝလာမှာ စိုးပေးမဲ့ ခဏ ခဏစားမိတဲ့ဟင်းပါ။
-ပုဇွန် ၁၅ ကောင် ကျောခွဲသန့်စင်ပြီး
-ကြက်ဥအနှစ်ချည်း ၂လုံး( ခလောက်ထား)
ပုဇွန်ကို ဆား၊ ကြက်သားမှုန့် တို့နဲ့ နယ်ထားပါ၊
ထောပတ်ကိုဆီ နဲနဲ နဲ့အပူပေးပြီး ပျော်ပစေ၊
ဆီတော်တော်ပူလာရင်ကြက်ဥအနှစ်ခလောက်ထား တာကို ဖြေးဖြေးချင်း လောင်းထဲ့လိုက်ပါ ရွှေဝါရောင်လေးများရပြီ ဆိုရင် ဖိုပေါ်ကချပြီး ဆီစစ်ထားပါ
နယ်ထားပြီးသား ပုဇွန်လေးများကို ထောပတ်ဆီနဲ့ကြော်ပါ၊ ပြီးမှ ကြက်ဥအမြုပ်လေးများခင်း၍သော်၎င်း အပေါ်မှဖြူး၍သော်၎င်းစားသုံးနိုင်ပါပြီ၊